जलशाहले खोक़्रो राष्ट्रवाद मुर्दाबाद भन्नुकाे कारण यस्ताे पाे रहेछ ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
जलशाहले खोक़्रो राष्ट्रवाद मुर्दाबाद भन्नुकाे कारण यस्ताे पाे रहेछ !
आइतबार बिहान भाइरल भएकाे एउटा अन्तर्वार्ताकाे कारण वर्षा राउत सामाजिक सञ्जालमा आलाेचित बन्न पुगेको छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आएर माफी मागेपनि धेरैले उनलाइ माफ गर्न सकेकाे छैन्न । मनिषाले दिएकाे एउटा अभिव्यक्त्तिकाे कारण उनले नेपालमा राम्राे चर्चा कमाइन् । भारतीय मिडियाले उनकाे खेदाे खने । तर नेपाली पनि के कम उनकाे समर्थनमा उत्रिए । राजेश हमाल देखि निखिल उप्रेतीसम्म उनकाे समर्थनमा उत्रिए । उसाे त नेपाली अभिनेत्रीहरुले पनि उनलाई मज्जाले साथ दिए ।
“वर्षाकाे भारतीय साथीलाई कसरी फेस गर्नु” भनेपछि उनका फ्यानहरु दुखी भए । केकी अधिकारी देखि लिएर निता ढुङगानाले समेत राष्ट्रियता सिकाउन भ्याए । पछि रिमा विश्वकर्मा भने उनलाई समर्थन गर्न आइन ।
त्यसपछि आइतबार नै उनले जनता टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिइन् । उनी त्याे अन्तर्वार्ताबाट पनि आलाेचनाकाे शिकार भइन् । नेपाली कलाकारहरु बिदेशमा पलायन भएकाे कुरालाई उनले उठान गर्दा अमेरिकामा रहेकी जल शाह आक्राेशित बनेकी हुन् ।
हाल अमेरिकामा रहेकी कुनै बेलाकी चर्चित नायिका जल शाहले आफ्नो नेपाल आमालाई माया गर्न नेपालमा नै बस्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्दै रोष व्यक्त गरेकी हुन् । नेपालमा बस्ने मात्र नेपाली हैन्न अमेरिकामा बसेर पनि म नेपाललाई माया गर्छु भन्दै उनले ‘खोक़्रो राष्ट्रवाद मुर्दाबाद’ भनेर वर्षालाई काउन्टर दिएकी छिन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, जेठ १२ २०७७ १८:५७:२२
सत्ता गठबन्धनबाट एनआरएनए अध्यक्षमा रविना थापा उम्मेदवार
इपिएस पास गरेका १७४ श्रमिक रोजगारीका लागि सोमबार कोरिया जाँदै
युक्रेनबाट ५११ नेपाली बाहिरिए (तस्बिरहरू)
युक्रेनबाट २ सय ४४ नेपालीको उद्धार